Waa kuwan sida loo hubiyo silsiladdaada baaskiilka inay xidhmaan iyo kala bixitaan - dieselboss
Waa kuwan sida loo hubiyo silsiladdaada baaskiilka inay xidhmaan iyo kala bixitaan
Ma jiraan qaybo badan oo ka muhiimsan baaskiilka oo ka badan silsiladeeda. Si kastaba ha ahaatee, way fududahay in la iska indho tiro xidhashada silsiladda taas oo keeni karta waxtar la’aanta gudbinta khatarta ah iyo xitaa silsiladda oo fashilantay.
Adiga oo ka hawlgelinaya ilka silsiladahaaga silsiladaha iyo xoqidda, silsiladdu waxay u wareejinaysaa tamarta ay lugahaagu soo saaraan giraanta dambe. Rollers iyo biinanka labadaba si tartiib ah ayey u dammaan. Inta badan waxaa la yiraahdaa silsiladda waa la fidiyay, laakiin dhererka silsiladdu waa sidii hore, laakiin awooddaada inaad qabato shaqada ayaa sii yaraanaysa, ilaa aad ugu dambeyntii ogaato in qalabkaagu simbiriirixan yahay.
Cimrigu waa adag tahay in la saadaaliyo sababtoo ah waxaa si weyn u saameeya xaaladaha aad ku safraysid iyo xadiga nadiifinta ee la samayn karo taas oo ku dhibi karta. Nasiib wanaag, waxaa jira siyaabo si sax ah loogu baadho xaaladdaada.
Entrada anteriorAnterior ▷▷ 2021 ▷ Rebal D Altura, Peso, Edad, Novia, Familia, Hechos, Biografía
Entrada siguienteSiguiente Las mejores opciones de microondas incorporadas en 2021